ထီပေါက်ကံနဲ့ ကေပီ | မောင် G
February 3, 2017 April 22, 2017 ~ Sithu Aung
မောင် G – ၉. ၃. ၁၉၈၅၊ မနက် ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ်၊ ရန်ကုန်မှာ တွက်ထားတဲ့ဇာတာပါ။ ဇာတာက ဟူးရားဇာတာ၊ ဆန္ဒနက္ခတ်က ၃၆ ပါ။
ဆရာ K – ဒါဖြင့် ဇာတာဖွဲ့
မောင် G – ပြီးပါပြီ။
ဆရာ K – ထီပေါက်မလား သိချင်လို့တဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ မေးတဲ့သူက တကယ်ရော သူထီပေါက်ချင်လို့ မေးတာလား။
မောင် G – ထီဆိုရင် ၃တန့်ပါ ဆရာ၊ ၂တန့်၊ ၆တန့်၊ ၁၁တန့်တွေလည်း ကြည့်ရမယ်။ ၂င်္လာကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ ၄ဟူးရာသီ၊ ၃င်္ဂါနက္ခတ်၊ ၃င်္ဂါဘုတ္တိမှာရပ်တယ်။ ၂တန့်သခင်က ၄ဟူး။ ၃တန့်သခင်က ၂င်္လာ၊ ၆တန့်သခင် ၆ကြာက ၂င်္လာကို သမသတ်မြင်တယ်၊ ၁၁တန့်မှာက ၃င်္ဂါ ရပ်ပြီး၊ ၂င်္လာက ၃င်္ဂါနက္ခတ်စီးတယ်။ အဲဒီတော့ သူတကယ် ထီပေါက်ချင်လို့ မေးတာပါပဲ။
ဆရာ K – ပေးဂဏန်းလဂ်နဲ့တစ်ချက်စစ်ကြည့်ဦး။
မောင် G – ပေးဂဏန်းလဂ်က ၆ကြာရာသီ၊ ၅တေးနက္ခတ်၊ ၆ကြာဘုတ္တိ။ ၆ကြာက ၂တန့်သခင် ၄ဟူးက ၆ကြာပိုင် ဘုတ္တိရပ်တယ်။ ၃တန့်သခင် ၂င်္လာကို ၆ကြာကမြင်တယ်။ ၆တန့်သခင်က ၆ကြာ။ ၁၁တန့်မှာက ၆ကြာရပ်တယ်။ အဲဒီတော့ ၆ကြာက ပင်မဘာဝရော၊ ဆက်စပ်ဘာဝတွေနဲ့ပါ ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မေးတဲ့မေးခွန်းက တကယ်သိချင်လို့ မေးတာပါ။
ဆရာ K – ဒါဖြင့်ထီက ပေါက်ရော၊ ပေါက်မှာလား။
မောင် G – ၃တန့်ဘာဝသန္ဓိဘုတ္တိဖြစ်တဲ့ ၂င်္လာကို ကြည့်ရမယ်။ ၂င်္လာက ဝကြမသွားဘူး။ ဝကြသွားပိုင်အိမ်လည်းမရပ်သလို၊ ဝကြသွားနေတဲ့ ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကိုလည်း မစီးဘူး။
၃တန့်ရဲ့ ၄တန့်၊ ၆တန့်၊ ၁၂တန့်တွေဟာ ၆တန့်၊ ၈တန့်၊ ၂တန့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်စပ်ဘာဝတွေကိုနှုတ်ပေးရင် ၈တန့်တစ်ခုပဲကျန်မယ်။ အဲဒီတော့ ၃တန့်ဘာဝသန္ဓိဘုတ္တိနက္ခတ်ဟာ ၈တန့်ရဲ့ဇာတ်ဆောင်မဖြစ်ရဘူး။ ၈တန့်မှာဂြိုဟ်မရှိ၊ ၅တေးပိုင်တယ်။ ၁နွေ၊ ကိတ်တို့က ၅တေးနက္ခတ်စီးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၂င်္လာက ၈တန့်နဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူး။
၁တန့်သန္ဓိဘုတ္တိဟာ ၁တန့်၊ ၂တန့်၊ ၃တန့်၊ ၆တန့်၊ ၁၁တန့်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ရမယ်ဆိုတာမှာ၊ ၁တန့်ဟာ ၆ကြာပိုင်ရာသီရပ်ပြီး ၆ကြာပိုင်ဘုတ္တိ စီးထားတယ်။ ၆ကြာဟာ ၂တန့်ဘာဝသခင်ပိုင် ၄ဟူးနက္ခတ်စီးတယ်။ ၃တန့်သခင် ၂င်္လာက ၆ကြာကိုမြင်တယ်။ ၆တန့်ဘာဝသခင်က ၆ကြာဖြစ်ပြီးတော့ ၁၁တန့်မှာ ၆ကြာရပ်တယ်။
ဆရာ K – ဒါဖြင့်ရင် အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေ ထုတ်ကြည့်လိုက်။
မောင် G –
၂တန့်၊ [ I – x / II – x / III – ၆ကြာ / IV – ၄ဟူး] – ၆ကြာဟာ ၂င်္လာနဲ့ သမသတ်ဖြစ်ပြီး၊ ၃င်္ဂါနဲ့ပူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၄ဟူး၊ ၆ကြာ၊ ၂င်္လာနဲ့ ၃င်္ဂါတို့ဟာ ၂တန့်ရဲ့ အကျိုးဆောင်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၃တန့် [ I – x / II – x / III – ၅တေး / IV – ၂င်္လာ] – ၂င်္လာဟာ ၆ကြာနဲ့ သမသတ်ဖြစ်လို့ ၅တေး၊ ၂င်္လာနဲ့ ၆ကြာတွေဟာ ၃တန့်ရဲ့ အကျိုးဆောင်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၆တန့် [ I – ၃င်္ဂါ၊ ၄ဟူး၊ စနေ / II – စနေ၊ ကိတ် / III –0/ IV – ၆ကြာ] – ၃င်္ဂါက ၆ကြာနဲ့ပူးပြီး စနေနဲ့ကိတ်တို့ကို ၈ တန့် အထူးမြင်နဲ့ မြင်ပါတယ်။ စနေကကိတ်ကိုပူးပြီး ရာဟုကို သမသတ်မြင်ပါတယ်။ ၆ကြာကတော့ ၂င်္လာ သမသတ်ကြပြီး၊ ၃င်္ဂါနဲ့ပူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၃င်္ဂါ၊ ၆ကြာ၊ စနေ၊ ကိတ်၊ ရာဟု၊ ၄ဟူး၊ ၂င်္လာဟာ ၆ တန့်ရဲ့အကျိုးဆောင်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၁၁တန့် [ I – ၂င်္လာ / II – ၃င်္ဂါ၊ ၆ကြာ / III – ၁နွေ၊ ကိတ် / IV – ၅တေး] – ဒါကြောင့် ၁နွေ၊ ၂င်္လာ၊ ၃င်္ဂါ၊ ၅တေး၊ ၆ကြာ၊ ကိတ်တို့ဟာ ၁၁တန့်ရဲ့ အကျိုးဆောင်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဆရာ K – ၁၁တန့်မှာ ဘာထူးခြားလဲ။ ၄ဟူးကို သတိထားကြည့်။
မောင် G – ၄ဟူးက ၁၁တန့်သန္ဓိနဲ့ ၃ အံသာ၊ ၂၀ လိတ္တာကြား ကပ်နေပါတယ်။
ဆရာ K – ဒါဖြင့်ရင်…
မောင် G – ၄ဟူးကိုလည်း ၁၁ တန့်ရပ်ဂြိုဟ်လို့မြင်လို့ရမယ်။ ၄ဟူးပိုင်နက္ခတ်စီးတာက ၆ကြာရှိတယ်။
ဆရာ K – ၃တန့်သန္ဓိဘုတ္တိက အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်လား။
မောင် G – ၂င်္လာက အဓိကဘာဝရော၊ ဆက်စပ်ဘာဝတွေ အားလုံးရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်ဖြစ်နေတယ်။ ၁တန့်ဘာဝသန္ဓိ ၆ကြာက ၁၁တန့်မှာရပ်လို့ ဒီလူထီပေါက်မှာ ရာနှုန်းပြည့်ကျိန်းသေတယ်။
ဆရာ K – ဒါဖြင့်ဘယ်တော့ ဒီလူထီပေါက်မှာလဲ။
အတန့်တစ်ခုရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်က သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဘာဝရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင် ဘုတ္တိကို စီးထားတယ်ဆိုရင် ဒီဘာဝကို အကျိုးဆောင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီနည်းနဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေကို ဖယ်ကြည့်ပေမယ့်၊ ဒီမှာတော့ ဂြိုဟ်ကိုးလုံးစလုံးက အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေထဲ ပါနေပါသေးတယ်။
ဆရာ K – စိုးမိုးဂြိုဟ်တွေနဲ့ စစ်ကြည့်ရင်ရော။
မောင် G – စိုးမိုးဂြိုဟ်တွေက ၆ကြာ၊ ၁နွေ၊ ၄ဟူး၊ ၃င်္ဂါနဲ့ စနေတွေပါ။ ကိတ်က ၆ကြာကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ရာဟုက ၃င်္ဂါကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ဆရာ K – ဒါဖြင့် ၁နွေ၊ ၃င်္ဂါ၊ ၄ဟူး၊ ၆ကြာ၊ စနေ၊ ရာဟု၊ ကိတ်ဆိုပြီး၊ ဂြိုဟ် ရ လုံးတောင် ကျန်နေမှာပေါ့။ အခုဘာဒဿာစားလဲ။
မောင် G – ၃င်္ဂါထူလ၊ ရာဟုဘုတ္တိ၊ ရာဟုအန္တရ၊ ရာဟုဝိဘုတ္တိပါ။
ဆရာ K – ဒါဆိုရင် ၃င်္ဂါနဲ့ ရာဟုတို့ တော်တော်အားကောင်းတာပေါ့။
မောင် G – ဟုတ်တယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်ဂြိုဟ်တွေကို ပယ်လို့ရဦးမလဲ ဆရာ။
ဆရာ K – ဝကြသွားဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်စီးထားတာတွေပယ်လိုက်။ ဝကြသွားတဲ့ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားတဲ့ ဂြိုဟ်ပိုင်တဲ့ ဘုတ္တိကို စီးထားတဲ့ ဂြိုဟ်တွေရှိတယ်ဆိုရင် ပယ်ထုတ်လိုက်။ ဥပမာကွာ ဂြိုဟ် A က ဂြိုဟ် B ပိုင် ဘုတ္တိကို စီးထားတယ်ဆိုပါတော့၊ တခါဂြိုဟ် B က ဝကြသွားနေတဲ့ ဂြိုဟ် C ပိုင်တဲ့ နက္ခတ်ကို စီးထားတယ်ဆိုရင် ဂြိုဟ် A ကို ဖယ်လိုက်ပဲ။
မောင် G – ဒါဆိုရင် ဝကြသွားဂြိုဟ်ပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထားတာက ၄ဟူးနဲ့စနေပဲ။ ၁နွေက ၄ဟူးပိုင်ဘုတ္တိမှာ ၄ဟူးက စနေပိုင်နက္ခတ်စီးလို့ သူ့ကိုဖယ်ရမယ်။ ၆ကြာက စနေဘုတ္တိစီးပြီး၊ စနေက စနေပိုင်နက္ခတ်ပဲပြန်စီးလို့ သူ့ကိုလည်းပယ်ရမယ်။ အဲဒီလိုလား။
ဆရာ K – အင်း၊ ဟုတ်တယ်။ ကေပီမှာက ဘုတ္တိနက္ခတ်က အရေးပါတယ်။ ဂြိုဟ်တစ်ဂြိုဟ်က ဘာဝတစ်ခုကို အကျိုးပြုမပြုဆိုတာကို သူစီးထားတဲ့ ဘုတ္တိနက္ခတ်ကို ကြည့်ရတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်စီးထားတဲ့ ဘုတ္တိသခင်ဂြိုဟ်က ကိုယ်အကျိုးဆောင်နေတဲ့ဘာဝရဲ့ ရတန့်ဘာဝကို အကျိုးဆောင်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကကိုယ့်ဘဝကို အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ်စီးထားတဲ့ ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်က ဝကြသွားပိုင် နက္ခတ်ကို စီးထားရင်လည်း ကိုယ်ကအားမရှိတော့ဘူး။
မောင် G – အဲ့ဒါဆိုရင် ၃င်္ဂါ၊ ရာဟု၊ ကိတ်တွေပဲ ကျန်တော့တာပေါ့။ အခုက ၃င်္ဂါထူလ၊ ရာဟုဘုတ္တိ၊ ရာဟုအန္တရ၊ ရာဟုဝိဘုတ္တိဆိုတော့ ဘယ်လိုရွေးပေးရမလဲ။
ဆရာ K – အဲဒီလူက အခုကိုပဲ ထီပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲမြင်လား။
မောင် G – မမြင်ဘူးဆရာ။
ဆရာ K – ၁တန့်သန္ဓိဘုတ္တိနဲ့ ၁၁တန့်တို့ ဆက်သွယ်ပုံကိုကြည့်လိုက်လေ။ ၁တန့်က ၆ကြာပိုင်ရာသီ၊ ၆ကြာပိုင်ဘုတ္တိမှာရပ်တယ်။ ၆ကြာက ၁၁တန့်မှာရပ်တယ်။ အဲဒီတော့ ထီပေါက်ဖို့ အရမ်းအားကောင်းနေတယ်။ အခုနေတခြားကိစ္စလာမေးလည်း ဒီလူက မကြာခင် အောင်မြင်မယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ ၁တန့်နဲ့ ၁၁တန့် ဆက်နွယ်မှု အားအရမ်းကောင်းတာကိုး။
မောင် G – ဟုတ်ပြီဆရာ။ ဘာလို့ကိတ်ကပျောက်သွားတာလဲ။
ဆရာ K – အဓိကက ဝကြသွားနေတဲ့ စနေနဲ့ ပူးနေတာပဲ။ ရာသီမတူပေမယ့် အံသာချင်း အရမ်းကပ်နေတယ်။ မင်းကအံသာအရေအတွက်ကို မကြည့်လိုက်လို့ မေ့သွားတာ။ နောက်မဖြစ်စေနဲ့။ နောက်တစ်ခုက ကိတ်သည် ၆ကြာရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပဲ။ ၆ကြာရာသီရပ်ပြီး ၆ကြာဘုတ္တိစီးတယ်။ ၆ကြာက အားနည်းတဲ့ဂြိုဟ် စနေနက္ခတ်စီးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးပိုင်နက္ခတ်မှာရပ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း စနေဘုတ္တိပြန်စီးထားတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ကိတ်က ရာဟုလောက် အားမကောင်းတော့ဘူး။ နောက် ၃တန့်ဘာဝဟာ စရရာသီရပ်လို့ မြန်မြန်အကျိုးပေးမယ်လို့ သိနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုကြည့်ရမှာက ထီတို့ဘာတို့ဆိုတာ ကံနဲ့ဆိုင်လို့ ကံဂြိုဟ်ကို ကြည့်ရမယ်။ ကံဂြိုဟ်က ရာဟုပိုင်ဘုတ္တိစီးထားတယ်။ ရာဟုက ၃င်္ဂါပိုင်ရာသီရပ်တယ်။
မောင် G – တကယ်ပဲ အဲဒီလူ အဲဒီတုန်းက ထီပေါက်လားဆရာ။
ဆရာ K – ပေါက်တယ်ကွ… လာမေးပြီးလို့ တလတိတိပြည့်တဲ့နေ့မှာ ပေါက်တာပဲ။ ဆုကြီးတော့မဟုတ်ဘူး ဆုသေးပဲပေါက်တယ်။ ဘာကြောင့် ဆုသေးပဲပေါက်လဲသိလား။
မောင် G – ဟင့်အင်း၊ မသိဘူး။
ဆရာ K – ၃တန့်သန္ဓိဘုတ္တိကိုကြည့်လေကွာ။ ကန်ရာသီမှာရပ်တယ်။ အမြံုရာသီဆိုတော့ ထင်သလောက် ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီခေတ်ကတော့ ငွေ ၆ သောင်းရှိရင် လေးဘီးကားဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ ၁ သောင်းစုပေါက်တယ်ဆိုတာ နည်းတော့ဘယ်နည်းပါ့မလဲ။
မောင် G – ဒါဆိုကေပီက တော်တော်မှန်တာပါပဲ ဆရာရယ်။
Posted in Astrology	gain in lottery?K.Pkrishnamurti paddhati
< Previous ခေါင်းဆောင်မှု၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်းအား ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Next > မွတ်ဆလင်ရှေ့နေကြီး လုပ်ကြံခံရမှု